Dowladda Islaamiga ah oo dhulka soo dhigtay Diyaarad ay leedahay dowladda Mareykanka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Islaamiga ah oo dhulka soo dhigtay Diyaarad ay leedahay dowladda Mareykanka.
On Mar 7, 2016 215 0
Sida ay baahisay Wakaaladda Acmaaq oo kamid ah warbaahinta ku dhow dowladda Islaamiga ah, ciidanka difaaca Cirka ee Mujaahidiinta ayaa ku guuleystay iney dhulka soo dhigaan diyuurad dagaal oo ay leedahay dowladda Mareykanka.
Diyaaradan oo ah noocyada dagaalka u I isticmaalaan Ciidanka Mareykanka ayaa lagu soo riday deegaan lagu magacaabo Shanduuxa oo dhaca koonfurta magaalada Arbiil oo ah xarunta maamulka kooxda Beshmergaha.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa ku guuleystay iyagoo adeegsanaya hubka lidka Diyaaradaha iney dhulka soo dhigaan diyaaradan, waxaana la aaminsanyahay in ay dhinteen ciidankii saarnaa diyaaradda oo tiro ahaan gaaraya sida dadka qaar ay sheegaan 3 Askari.
Dowladaha Reer galbeedka iyo Rawaafida Ciraaq ayaa isku diyaarinaya iney qal qal geliyaan magaalada Moosil oo ku jirta gacanta Shareecada Islaamka, waxaana ciidamo aad u farabadan lasoo tubay deegaanada u dhexeeya Arbiil iyo Mowsil, balse Mujaahidiintu uma jiifaan, waxaana la soo sheegayaa in Ciidamada Keydka ee Mujaahidiintu ku qul qulayana wilaayada Naynawaa.
Gaashanbuursiga ay Reer galbeedku wataan ayaa hadafkiisu yahay in lagu dumiyo Shareecada Islaamka oo si muuqata uga hir gashey gobollo farabadan oo katirsan dalka Ciraaq, halkaas oo ay maamusho dowladda Islaamiga ah.